राहत दिएर फकाउन खोज्ने ओली सरकालाई निर्मलाका बुवाको काउन्टर, एक पैसा नलिने घोषणा::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
राहत दिएर फकाउन खोज्ने ओली सरकालाई निर्मलाका बुवाको काउन्टर, एक पैसा नलिने घोषणा
मिडिया डबली प्रकाशित : सोमवार, भदौ ११, २०७५
कञ्चनपुर – बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तका परिवारले सरकारले दिने राहत रकम नलिने घोषणा गरेका छन्। आफूहरुलाई पैसा होइन न्याय चाँहिएको भन्दै उनीहरुले एक रुपैयाँ पनि नलिने घोषणा गरेका हुन्। निर्मलाका बुवा एकराज पन्तले राहत दिन्छु भन्ने सरकारको निर्णयले आफूहरुलाई दुःखी बनाएको बताए।
उनी भन्छन्– ‘न्याय चाहिएको हो, सरकारको एक रुपैयाँ लिन्नँ’
सरकारले हिजोमात्रै राहतस्वरुप १० लाख दिने निर्णय गर्यो रे! मैले आज सुनेँ ।
सरकारको यो निर्णयले मलाई झन् दुखित बनाएको छ । मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको एउटा कुरा हो– मलाई अरु केही चाहिएन, न्याय चाहियो । मेरी निर्मलाको वास्तविक हत्यारालाई सजाय हुनुपर्छ, कारवाही हुनुपर्छ । म चाहन्नँ, मेरी छोरी निर्मलाको जस्तै नियती अरु बुबाका निर्मलाहरुले भोग्नु परोस् ।
मैले त मेरी छोरी गुमाइसकेको छु । अब राज्यले दोषीलाई कारवाही गर्नु पर्यो । र, त्यो हत्यारालाई हामी सबैको अगाडि नै कारवाही भएको हेर्न मन छ ।
म सरकारले दिने भनेको १० लाख लिन्नँ, किनकि मलाई पैसा चाहिएको होइन, न्याय चाहिएको हो । अनि न्यायको बदला पैसा हुनै सक्दैन ।
सरकारले पठाएको छानबिन समितिले आज बिहान मलाई सरकारको निर्णय सुनाएको हो । मैले टोलीमा हुनुभएका सरहरुसँग पनि भनेँ– मलाई पैसा चाहिँदैन, हामीलाई पैसा चाहिँदैन, न्याय दिनुहोस् ।
यो मेरो अनुनय हो, विनय हो ।
मलाई विश्वास छ, पहिलेका एसपी डिल्लीराज विष्टले हाम्रो आँखामा छारो हाल्ने काम गरेका हुन् ।
त्यसैले अहिले पनि मेरो एउटै माग छ– मेरी छोरीको हत्यारालाई जसरी हुन्छ कारबाही हुनुपर्छ । चाहे त्यो हत्यारा मेयरको भतिजो होस् या कुनै राजाकै छोरा किन नहोस् । एसपीको छोरा, फलानो ठूलो मान्छेको छोरा वा फलानो ठूलो मान्छे भनेर राज्यले यस्ता हत्यारालाई नछोडिदिओस् ।